Amathikithi Eshibhile Ama-ICE wesitimela Kanye namanani entengo yokuhamba | Londoloza Isitimela
Amathikithi Eshibhile Ama-ICE wesitimela Kanye namanani entengo yokuhamba
Ikhaya > Amathikithi Eshibhile Ama-ICE wesitimela Kanye namanani entengo yokuhamba
Lapha ungathola lonke ulwazi mayelana neJalimane Amathikithi wesitimela ashibhile futhi Izintengo zokuhamba ze-ICE kanye nezinzuzo.
Izihloko: 1. I-ICE ngesithombe esiphakeme
2. Mayelana ne-ICE Train 3. Imininingwane ephezulu yokuthola ithikithi leshibhile le-ICE
4. Amanani amathikithi we-ICE abiza malini 5. Izindlela Zokuhamba: Kungani kungcono to thatha isitimela se-ICE, futhi ungahambi ngendiza
6. Uyini umehluko phakathi kwe-Standard Class neFirst Class ku-ICE 7. Ingabe kukhona okubhaliselwe kwe-ICE
8. Kuthatha isikhathi esingakanani ngaphambi kokuhamba kwesitimela se-ICE 9. Yini amashejuli wesitimela we-ICE
10. Yiziphi iziteshi ezisetshenziswa yi-ICE 11. I-ICE Izitimela FAQ
I-ICE ngesithombe esiphakeme
Isitimela esisheshayo eJalimane yisitimela se-ICE ngejubane lika-300km / hr.
Tisitimela se-ICE esihamba phambili sesitimela saseJalimane sixhuma yonke imizi ngaphakathi kweJalimane.
Kuzo zonke izitimela ezihamba ku- Uhlelo lwezitimela lwaseJalimane, I-ICE ingeSigaba A.
Izitimela ze-ICE zenzelwe ukuqhudelana nezindiza mayelana nenduduzo nesikhathi sokuya lapho ziya khona.
Imizila yamazwe omhlaba ye-ICE ifaka neFrance, EBelgium, I-Denmark, E-Austria, abase Netherlands, naseSwitzerland.
Mayelana ne-ICE Train
I-Intercity-Express noma ngegama layo lesinqamuleli ICE uhlelo lwe izitimela ngesivinini ephethwe yiDeutsche Bahn, Umhlinzeki wesitimela kazwelonke waseJalimane. I Izitimela ze-ICE aziwa ngokunethezeka, isivinini, futhi baduduze njengoba bexhumanisa yonke idolobha eJalimane.
Ngesivinini esifinyelela ku-300km ngehora, ukuhamba ngesitimela se-ICE kuyindlela esheshayo yokuhamba phakathi kwamadolobha akude njengeCologne neHamburg.
Imizila Yokuhamba ye-ICE akhawulelwe eJalimane kuphela. Isitimela sihamba emizileni yamazwe omhlaba eya e-Austria, France, EBelgium, eSwitzerland, I-Denmark, kanye neNetherlands.
Iya ku Gcina Ikhasi eliyisiqalo noma usebenzise lewijethi ukusesha uqeqesha amathikithi e-Ice Trains
Imininingwane ephezulu yokuthola ithikithi leshibhile le-ICE
inombolo 1: Bhuka amathikithi akho e-ICE kusengaphambili ngangokunokwenzeka
Uma uthanda ukuthola amathikithi we-ICE ashibhile, eyokuqala uyithengile, kukhulu amathuba akho okuwathola ashibhile. Bangu 3 Izinhlobo zamanani aphansi we-ICE nazo zonke izinhlobo zamathikithi amathathu ziyatholakala ngesikhathi sokuqala sokuthengisa, kodwa umsindisi uyagibela, Intengo yesaver, futhi iSuper sparpreis ingahle ingatholakali njengoba usuku lokuhamba lusondela. Ungahle ubhukhe amathikithi okugibela ekuqaleni 6 izinyanga ngaphambi kokusuka.
inombolo 2: Oda amathikithi akho e-ICE wesitimela lapho uqinisekile ngohambo lwakho
Ukuqiniseka ngohambo lwakho nangedethi yokuhamba kuzokongela imali emalini ebuyiselwe. Izinga lembuyiselo nenketho yokubuyisa amathikithi e-ICE angasetshenzisiwe kuncike ohlotsheni lwethikithi olithengayo. Futhi, imali yokubuyiselwa imali iphansi kumathikithi okugibela imali engu-saver kunamathikithi ajwayelekile okugibela. Qaphela ukuthi i-DB ngeke ikubuyisele imali uma ubuyisa ithikithi lakho. Ukubuyiselwa kwemali kwe-DB kwenziwa ngamavawusha we-DB, ongayisebenzisa ukukhokhela noma iyiphi insizakalo abayinikezayo. Ungathengisa futhi i- Amathikithi wesitimela e-ICE online ezinkundleni ze-inthanethi uma ufisa ukubuyisa imali.
inombolo 3: Ukuhamba ngesitimela se-ICE ngezikhathi ezingekho ngaphezulu
Amathikithi e-ICE ashibhile ezikhathini ze-off-Peak (NgoLwesibili, NgoLwesithathu, Ngolwesine, nangoMgqibelo). Ngesikhathi sezinsuku eziphezulu, amathikithi ashibhile athengiswa ngokushesha okukhulu, kusale amathikithi weFlexpreis kuphela. Ukuhamba ngezinsuku ze-Peak, bhuka kusengaphambili ukuze uthole amathikithi wokugibela. Uma ungakwazi ukuthola amathikithi okuhamba konga, qiniseka ukuhamba phakathi kokusa ekuseni nantambama (ngenxa yabahamba ngebhizinisi) njengoba amathikithi e-Flexpreis abe eshibhile ngaleso sikhathi. Okokugcina, gwema ukuhamba phambili esidlangalaleni kanye namaholide ezikole njengoba amanani amathikithi e-ICE nawo azokwenyuka.
inombolo 4: Thenga amathikithi akho e-ICE ku-Gcina A Isitimela
Uzothola ukunikezwa okuhle kakhulu kwamathikithi esitimela e-ICE eYurophu kuwebhusayithi yethu, Londoloza Isitimela. Sineminikelo emikhulu yamathikithi wesitimela eYurophu nasemhlabeni. Ngokuxhumeka kwethu kwabaningi babaqhubi bezitimela kanye nama-algorithm afanele, sikunikeza amathikithi ashibhile we-ICE ongawathola. Futhi, sithola ezinye izindlela ezishibhile zezitimela ezingezona eze-ICE.
Amanani amathikithi we-ICE abiza malini?
Intengo yethikithi le-ICE kuya ngohlobo lwethikithi kanye nesigaba sezihlalo osifunayo. ngokuvamile, ujantshi German idume nge amanani entengo aphansi e-ICE. Kunezinhlobo ezintathu zamathikithi wesitimela se-ICE - ithikithi elijwayelekile noma leFlexpreis, amathikithi okugibela iSupersaver noma iSupersparpreis, kanye nokugibela imali okusindisa noma amathikithi eSparpreis ICE. Amathikithi okugibela ashibhile kunamathikithi ajwayelekile, kodwa amathikithi atholakalayo anciphisa njengoba usuku lokuhamba lusondela. Amanani amathikithi e-ICE kuya ngesigaba osikhethile futhi nansi itafula lokufingqa lamanani aphakathi neklasi ngalinye:
Okujwayelekile 17 € – 50 € 30 € – 120 €
I-Premium 21 € – 70 € 58 € – 152 €
Ibhizinisi 40 € – 87 € 80 € – 180 €
Izindlela Zokuhamba: Kungani kungcono ukuthatha isitimela se-ICE, futhi ungahambi ngendiza?
1) Gwema Izinqubo Zangaphambi Kokugibela. Uma indiza nge 9 ngi, ungcono ukuba sesikhumulweni sezindiza okungenani ngo 7 ngenxa yalokho ngesikhathi obe kufanele ngabe usudlule kuzinqubo zangaphambi kokugibela nokuhlolwa kokuphepha, sekuzoba isikhathi sokuba ugibele indiza.
Ngezitimela ze-ICE, ungafika noma nini ngaphambi kokusuka inqobo nje uma uyenza esitimeleni ngaphambi kokuhamba. Lokhu kungenzeka ngoba azikho izinqubo ze-Pre-Boarding noma amasheke ezokuphepha anomoya omude. Vele ubonise esiteshini, thola isitimela sakho enkombeni, nokugibela!
Sesikhathi sokuhamba esiphelele, I-ICE iwina izindiza eJalimane njengoba yenza ngentengo futhi. Asides from time wasched in Izinqubo zangaphambi kokugibela, izindiza zilahlekelwa ngokuphelele isikhathi sokuvakasha ekuhambeni (kusuka esikhumulweni sezindiza kuya endaweni eqondile).
2) Imali ekhokhwayo. Ungaqiniseka ukuthi uzokhokha okuthe xaxa ngamasudi uma uhamba ngendiza. Nokho, Uma uhamba ngezitimela ze-ICE ukhokha imali yomthwalo kuyizindleko ezingeziwe ongeke uzenze uma uthenga amathikithi esitimela eshibhile e-ICE. Ukucacisa, nge amanani ashibhile e-ICE, kufanele ukhokhele noma iyiphi ipotimende ohamba nalo. Lokho kwenza i-ICE ibe yindlela engabizi kakhulu futhi yokuhamba engcono.
3) Izitimela zihambisana nemvelo kakhudlwana. I Isitimela se-ICE kunjalo ukulungele imvelo kakhulu kunezindiza, okufaka isandla ekungcolisweni komoya. Ukuhamba ngesitimela kungcolile okungu-20 × ngaphansi kwekhabhoni kunokuhamba ngendiza.
Uyini umehluko phakathi kwe-Standard Class neFirst Class ku-ICE?
Ngokungafani nezinye izitimela ezinamathikithi wezindawo ezihlukile (standard, ibhizinisi, umphathi, njll) njengaseTrenitalia, I-ICE yaseJalimane yehlukile kancane. Kunezigaba ezimbili kuzo zonke izitimela ze-ICE - isigaba sokuqala nesesibili. Umehluko omkhulu phakathi kwalezi zigaba zombili intengo, ukuguquguquka, nezinsizakalo ezinikezwayo.
Njengoba iphathelene namathikithi kanye nezindawo eziklasini esitimeleni se-ICE, noma yiluphi uhlobo lwamathikithi lube sesigabeni sokuqala. Lokhu kusho ukuthi ngisho amathikithi esitimela eshibhile e-ICE, inani lokusindisa, futhi iSuper sparpreis ingakwazi ukukhokhela izihlalo ezihamba phambili. Nokho, inani liyahlukahluka kuwo womabili amakilasi, njengoba kuboniswe ngenhla.
Amathikithi Okuqala we-ICE:
Isigaba sokuqala se-ICE sisetha indinganiso yokunethezeka, induduzo, kanye nomsebenzi oncomekayo ohlelweni lwezitimela lwaseJalimane. Yakhelwe izindiza zezimbangi, Izitimela ze-ICE zinikeza induduzo yohambo olude. Ngaphezu kwalokho, amagumbi okuqala enziwa cishe ingxenye eyodwa kwezintathu zesitimela futhi angaba ngamakamelo amathathu ngokuya ngesitimela se-ICE esithathiwe.
Izihlalo zekamelo lokuqala zinkulu futhi zihlelwe ngendlela ehlukile ku 2-1 ukuhlelwa kunokuba a 2-2 ekilasini lesibili. Futhi lokhu kukhulula isikhala esithe xaxa sabagibeli sabagibeli. Ngaphezu kwalokho, izihlalo ezisesigabeni sokuqala se-ICE nazo zimbozwe ngesikhumba se-faux futhi zinkulu kunezo zesigaba sesibili. Njengabantu bebhizinisi ngokujwayelekile basebenzisa isigaba sokuqala, kunamatafula aqinile atholakala kubagibeli abafuna ukwenza umsebenzi othile ngenkathi besendleleni.
Izinsizakalo ezingeziwe ezihlukanisa isigaba sokuqala nesekilasi lesibili ezitimeleni ze-ICE zifaka mahhala, amaphephandaba nsuku zonke, khulula angenamkhawulo WI-FI, nama-amplifier akhethekile ukuvimbela ukuphazamiseka ekwamukelweni kweselula. Abagibeli beFirst Class nabo banga-oda ukudla kwabo ezihlalweni zabo uma bengafuni ukuya endaweni yokudlela egibela isitimela.
Enye inzuzo ekhawulelwe kubahambi be-ICE bokuqala ukubhuka isihlalo. Wonke amathikithi okuqala, kuhlanganise amathikithi we-ICE ashibhile, ukujabulela lokhu kusizakala. Akudingeki ukhathazeke ngokungahleliwe ukuthola isihlalo sefasitela; ungakhetha ukuthi yisiphi isihlalo osifunayo ngenkathi ubhuka futhi usigcinile.
Amathikithi E-Second Class ICE:
Okwenziwayo kweBanga lesibili akude kangako neKlasi Lokuqala kunduduzo. Ngaphezu kwalokho, izihlalo ezisegumbini lesigaba sesibili zingcono kunezihlalo ezijwayelekile zebhanoyi. plus, ziyi-ergonomic, woza ne-headrest, futhi zimbozwe ngendwangu eyakhiwe. Lokhu kwenza uhambo olude lwebanga elide.
Kunamagumbi amaningi wesigaba sesitimela ngasinye se-ICE kunalawo okuQala Lokuqala. ikakhulukazi, ukuhlelwa kokuhlala ekilasini lesibili kuqine kancane kunokwesigaba sokuqala. Kunezihlalo ezine emugqeni ngamunye (2-2 ukuhlelwa kwesihlalo), nazo zonke izihlalo ezimbili zabelana ngokuphathwa okuphakathi.
Ngaphezu kwalokho, abagibeli bekilasi lesibili banokufinyelela kwezinye zezinsizakalo ekilasini lokuqala kepha kunemikhawulo. Thatha i-WI-FI ngokwesibonelo. Ekilasini lesibili, I-Wi-Fi ayinamkhawulo njengoba injalo kubagibeli besigaba sokuqala. Abagibeli besigaba sesibili futhi abanakho ukufinyelela emaphephandabeni ansuku zonke mahhala ngakho-ke uma ungathanda ukuthola iphephandaba ekilasini lesibili, kuzofanele uthenge eyodwa.
Abagibeli besigaba sesibili kufanele baye endaweni yokudlela uma befuna uku-oda ukudla. Abakwazi uku-oda ezihlalweni zabo njengoba kusegunjini lokuqala le-ICE. Futhi, Amathikithi e-ICE esigaba sesibili kuzo zombili i-Flexpreis ne-saver fares awahlanganisi ngokuzenzakalela ukubhuka kwezihlalo. Uma uthanda ukubeka isihlalo ekilasini lesiBili, Kuzofanele ukhokhe inani elingeziwe le- € 6. Ngokufanayo bobabili abagibeli bekilasi lokuqala nabesigaba sesibili banendawo kagesi kuzo zonke izihlalo.
Ingabe kukhona okubhaliselwe kwe-ICEinkomba?
I-ICE inikeza ukudlula kwesitimela ku- ezishibhile ICE zemininingwane amanani zokuhamba okungenamkhawulo kulo lonke elaseJalimane noma eYurophu. Kunezinhlobo ezintathu zokudlula kojantshi:
I-Germany Rail Pass
Ukudlula kojantshi baseJalimane kungokuhamba okungenamkhawulo ngaphakathi eJalimane. Futhi, kungenxa yabahambi abangahlali eYurophu, igalikuni, kanye neRussia. Izinzuzo ezimbalwa ze-German Rail Pass zifaka phakathi:
Abanikazi bokudlula kwesitimela bangavakashela izindawo ezithile zamabhonasi ngaphandle kweJalimane (Salzburg, I-Venice, futhi Brussels)
Amathikithi esitimela e-ICE ehlisiwe kuwo wonke umuntu ongaphansi 28 iminyaka
Ukuhamba okungenamkhawulo kulo lonke elaseJalimane
Abantu ababili bangonga imali ethe xaxa ngokusebenzisa iTwin Pas lapho behamba ndawonye
Ukuvumelana nezimo kuvumela abaphathi besitimela saseJalimane ukuba bahambe noma nini nganoma isiphi isikhathi
Abaphethe iphasiphothi yaseJalimane bangakhetha kusuka 3 ukuze 15 izinsuku zokuhamba ezilandelanayo kungapheli inyanga lapho uthenga iphasi.
Ukudlula kwe-Eurail kuvumela abantu abangewona ama-Europe abahlala ngaphandle kweRussia, EYurophu, kanye neTurkey yokuhamba ngokunqunyelwe eYurophu. Ezinye izinzuzo zifaka phakathi:
Izaphulelo nezaphulelo zokuheha izivakashi.
Izigaba ezahlukahlukene ongakhetha kuzo - Adult, Abadala, Nentsha.
Ukuhamba okungenamkhawulo 31 amazwe aseYurophu, kubandakanya iTurkey.
I-InterRail idlula isiza abantu abahlala eRussia, igalikuni, noma iYurophu ukuhamba okungenamkhawulo kulo lonke elaseYurophu. Izindlela zokudlula zifaka:
Izaphulelo zivuliwe Amathikithi wesitimela e-ICE okwabantu abasha nabadala.
Uhambo olungenamkhawulo lokuya 33 amazwe aseYurophu
Ukugibela kwamahhala kwesitimela kubaphathi bePass abahamba nezingane ezingaphansi kwezimbili 11 iminyaka.
Isikhathi sokuhamba se- 3 izinsuku ukuze 3 izinyanga umuntu ngamunye.
Ukudlula ngakunye kuyatholakala futhi kufanele kusebenze ngaphakathi 11 izinyanga zokuthenga.
Kuthatha isikhathi esingakanani ngaphambi kokuhamba kwesitimela se-ICE?
Ukuqinisekisa ukuthi ufika ngesikhathi ukuze ugibele, ukwehlisa izinga, futhi ngisho phequlula ezitolo, welulekwa ukuthi ufike okungenani 30 imizuzu ngaphambi kwesikhathi sakho sokuhamba.
Yini amashejuli wesitimela we-ICE?
Amashejuli wesitimela awalungiselelwe, okwenza kube nzima ukuphendula. Nokho, ungakwazi ukufinyelela amashejuli wesitimela se-ICE ngesikhathi sangempela ekhasini eliyisiqalo le-Save A Train. Faka imvelaphi yakho nendawo oya kuyo futhi uthole ukufinyelela ngokushesha kuwo wonke amashejuli wesitimela se-ICE. Isitimela sokuqala se-ICE sihamba 6 ngi, nezitimela zishiya yonke 30 imizuzu eya ezindaweni ezinkulu.
Yiziphi iziteshi ezisetshenziswa yi-ICE?
Imizila ye-ICE yomhlaba wonke isuka eziteshini zomhlaba eziningi, phakathi kwabo kukhona IBrussels Midi Zuid (Isiteshi saseNingizimu Brussels Midi ngesiNgisi), I-Arnhem Central, kanye ne-Amsterdam Central, futhi abaningi.
Ukufika, Izitimela ze-ICE fika 11 Iziteshi zaseJalimane nesiteshi esisodwa saseSwitzerland. Futhi, iziteshi ezinkulu zokufika zifaka i-Oberhausen, EDuisburg, Dusseldorf, I-Cologne, Isikhumulo sezindiza iFrankfurt (Isikhumulo Sezindiza Esikhulu saseFrankfurt), Manheim, Siegburg, nabanye.
Ngaphezu kwalokho, IDusseldorf yidolobha elihle eliseRhinine elinomlando ocebile wamasiko nokuzizwa. Kunezinto eziningi ezihehayo ezingamasiko nezingokomlando ezizobonwa futhi imizila ebabazekayo ukuhamba nokuyindawo enkulu yokuthenga. Kuyindawo efanelekile yefayela le- ngempelasonto uthole nabangani noma umndeni.
Kusuka e-Amsterdam Central (ICentraal iseDashi futhi kusho iSiteshi Esimaphakathi), ungafika eFrankfurt, idolobha elaziwa njengenhloko-dolobha yezimali yaseYurophu. Yini enye, bangu amabhishi amahle, iminyuziyamu, nezindawo zokudlela ezivakashelwa.
I-Cologne iyisikhungo sobuciko, izakhiwo, futhi umlando ocebile. Ngesitimela se-ICE esivela e-Amsterdam Centraal, ungafika eCologne ukuze uzicwilise ebuhleni okulo dolobha.
ngempela, kunezingadi ezinhle kakhulu ze-botanic, izindawo zokudlela ezinobubanzi obukhulu bobuciko obusezingeni eliphezulu, zoos, iminyuziyamu, kanye nama-pubs ukujabulela. Futhi, uma ungaqiniseki ukuthi yisiphi isiteshi okufanele usikhethe, algorithm yethu izokusiza ukhethe.
I-ICE Izitimela FAQ
Yini okufanele ngiyilethe nami ku-ICE?
Ngaphandle kwakho? Woza nedokhumenti lakho lokuvakasha, ipasipoti evumelekile, nomshuwalense wezokuvakasha awuphoqelekile kodwa lo mbhalo ulungele impilo yakho.
Iyiphi inkampani engumnikazi we-ICE?
I-Intercity-Express (ICE) ungumnikezeli wesitimela wezwe lonke waseJalimane, iDeutsche Bahn, kanti i-DB iphethwe nguHulumeni waseGerman Federal.
Ngingaya kuphi ne-ICE?
I-ICE ngokuyinhloko idlula kuyo yonke imizi eJalimane. Kukhona amanye amazwe omhlaba Imizila yokuhamba ye-ICE kwamanye amazwe asemngceleni weJalimane.
Yiziphi izinqubo zokugibela izitimela ze-ICE?
Azikho izinqubo zokugibela ezifashisayo. Lapho ufika esiteshini, hlola amabhodi ezinkomba ukuthola isitimela sakho. Ngaphezu kwalokho, lapho-ke ungagibela isitimela noma kunini ngaphambi kokuthi kuhlelwe ukuthi sisuke.
Yiziphi izinsizakalo ezikhona esitimeleni se-ICE?
ICE Train inikeza ekudleni kokuhamba lapho imenyu iqukethe ukudla, ukudla okulula, neziphuzo zazo zonke izinhlobo. Ngaphezu kwalokho, kukhona amachweba okushaja eduze kwesihlalo ngasinye, khulula WiFi (akunamkhawulo kuKlasi Lokuqala), kanye nama-amplifera okwamukela iselula okungenasiphazamiso (kuphela ngeFirst Class).
Okuceliwe kakhulu ICE IQ – Ingabe kufanele ngibhukhe isihlalo kusengaphambili ku-ICE?
Akumele ubhukishe isihlalo kusengaphambili, kodwa ungenza ukubhuka kwesihlalo uma ufuna. Uma uthenga ithikithi lokuqala, ufaneleke ngokuzenzakalela ukuthola isihlalo esibekelwe mahhala.
Ingabe ikhona i-intanethi ye-WiFi ngaphakathi kwe-ICE?
Yebo, nakhu. Egumbini lesigaba Sesibili, I-inthanethi ye-WI-FI imahhala kepha ayinamkhawulo njengoba injalo kuFirst Class.
Ekugcineni, Uma ufinyelele kulokhu, wazi konke okudingeka ukwazi mayelana nezitimela ze-ICE futhi ulungele ukuthenga ithikithi lakho lesitimela le-ICE SaveATrain.com.
Ngabe ufuna ukushumeka leli khasi esizeni lakho? Chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-ice%2F%0A%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi), Noma ungaxhumeka ngqo kuleli khasi.